Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Solomon Islands » Dalxiiska Solomons ayaa u baroor diiqaya geerida maamulaha guud Josefa Tuamoto
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Shirka Warka Warshadaha • Shirarka • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Wararka Solomon Islands • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Madaxa Dalxiiska Solomons Josefa 'Jo' Tuamoto
Isagoo ku dhawaaqaya warka murugada leh, guddoomiyaha guddiga dalxiiska Solomons, Chris Hapa ayaa sheegay in kooxda xafiiska dalxiiska qaranka ay aad uga xumaadeen luminta gacaliyahooda 'Boso' oo ku jiray doorka maamulaha tan iyo markii uu ku biiray Xafiiska Booqdayaasha Solomon Islands ee 2013.
Maareeyaha Dalxiiska Solomons, Josefa 'Jo' Tuamoto oo ku dhintay Suva, Fiji, Talaadadii, Sebtember 21.
Mr Tuamoto ayaa dhawaan ku soo noqday Fiji si uu ugu dhowaado qoyska halka uu ka soo kabsaday ka dib markii uu dhawaanahanba xanuunsanaa.
Mid ka mid ah guulaha aadka u sarreeya ee Mr Tuamoto ayaa yimid sanadkii 2018 markii uu ahaa mashiinka ka dambeeya tallaabadii loogu magac daray Xafiiska Booqdayaasha Solomon Islands ee Dalxiiska Solomons.
Warshadaha dalxiiska ee jasiiradaha Solomon Islands ayaa barooranaya geerida agaasimihii dalxiiska Solomons, Josefa 'Jo' Tuamoto oo ku geeriyooday Suva, Fiji, Talaadadii, Sebtember 21.
"Shaki kuma jiri karo Jo inay saamayn weyn ku yeelatay warshadaha dalxiiska ee Jasiiradaha Solomon wakhtigiisii ​​halkan," ayuu yidhi Mr Hapa.
“Aad ayaan u nasiib badnay markii uu aqbalay dalabkii ahaa inuu nagu soo biiro 2013, sumcadiisii ​​uu ku lahaa goobta dalxiiska gobolka, iyo gaar ahaan saamayntii uu ku yeeshay waaxda dalxiiska Fiji adduunkoo dhan halka maamulaha Dalxiiska Fiji, in ka badan sidii hore isaga.
“Jo wuxuu ka tagayaa dhaxal aad u weyn. Wakhtigiisii ​​uu nala joogay, waxaan aragnay qaybta dalxiiska ee Jasiiradaha Solomon in ay aad u korayso.
“Dalxiiska maanta ayaa wax weyn ku soo kordhiya dhaqaalaha qaranka, xilligii aafo-ka-hortagga COVID-19 waxaan aragnay booqashooyinka caalamiga ah oo kordhay ku dhawaad ​​10 boqolkiiba sannad-sannadeedka iyo tilmaamaha Jo ee abuurista suuqgeynta caalamiga ah ee socota ololaha ayaa arkay dalkeena yar oo hadda loo aqoonsaday inuu yahay kaalin weyn masraxa dalxiiska gobolka.